I-Orlistat powder (96829-58-2) hplc≥98% Umvelisi kunye nomzi mveliso
Akukho kalo SKU: 96829-58-2. Udidi: I-Fat Loss powder
Le yimeko apho kukho uthintelo lokuhamba kwe-bile kwisibindi. Kukho iingxelo ezininzi ezidibanisa i-orlistat yokulimala kwesibindi, nangona kwenzeka kwiimeko ezinqabileyo okanye phantsi komthamo omkhulu.
Iimeko ezinjalo zinqabile kodwa ziya kwenzeka xa uneengxaki ezithile zesibindi, okanye uthatha umthamo ophezulu. Ngo-2010, i-FDA ibandakanye isilumkiso sokhuseleko kwiilebhile ze-orlistat, ezibonisa umngcipheko wokulimala kwesibindi.
Nangona kunjalo, isiphumo esibi sisengxoxo-mpikiswano kuqwalaselwa ukuba olunye uphando olwapapashwa kwiBritish Medical Journal lubonisa ngenye indlela.
Ezinye iziphumo ebezingalindelekanga eziqhelekileyo zibandakanya unxunguphalo, intloko ebuhlungu, ukuntyatyamba, ukungonwabi, ukudinwa, ukuthanda ukutya, kunye neendlulamthi. Ukuba ufumana iimpawu ezisesandleni, kufuneka wazise ugqirha wakho kwangoko okanye uxele kwiNkqubo yeNgxelo ye-FDA.